American Dogwood (အမေရိကန် ယုဇနပင်) - Hello Sayarwon
American Dogwood (အမေရိကန် ယုဇနပင်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » American Dogwood (အမေရိကန် ယုဇနပင်)
American Dogwood (အမေရိကန် ယုဇနပင်) ကဘာလဲ။
အမေရိကန် ယုဇနပင် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အမေရိကန် သစ်ချသီးသည် အပင်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီး ထိုပင်၏ အခေါက်ကို ဆေးဖော်စပ်ကာ
ခံတွင်းတွေ့ပြီး စားကောင်းစေရန် အားဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။ စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုကြပါသည်။
အချို့သူများသည် အမေရိကန် ယုဇနကို အပူလောင်ခြင်း နှင့် ဒါဏ်ရာများ ပျောက်ကင်းရန် လိမ်းကြပါသည်။ အမေရိကန် ယုဇန သည် ဂျမေကာ ယုဇနနှင့်မတူကြောင်း သတိပြုပါ။
ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ပက်သက်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ အကြံဉာဏ်များရယူပါ။ သို့သော် အချို့သောလေ့လာမှုများအရ အမေရိကန် ယုဇနသည် ဌက်ဖျားရောဂါအတွက်ကောင်းသည်ဟုဆိုပါသည်။
အမေရိကန် ယုဇနပင် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အမေရိကန် ယုဇန အပါအဝင်အခြား ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
အမေရိကန် ယုဇနပင် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များအတွက် အမေရိကန် ယုဇနပင် နှင့် ပက်သက်ပြီး လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ အကြံဉာဏ်များရယူပါ။
အမေရိကန် ယုဇနပင် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
အမေရိကန် ယုဇန နှင့်ပက်သက်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပက်သက်ပြီး သိလိုသော် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ အကြံဉာဏ်များရယူပါ။
အမေရိကန် ယုဇနပင် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
အမေရိကန် ယုဇနပင် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
လူတဦး နှင့် တဦးအပေါ်မူတည်ပြီးဆေးအညွှန်းများ ကွာခြားမှုရှိပါသည်။ အသက်အရွယ် ၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများအပေါ်မူတည်ပြီး လည်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန် တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
အမေရိကန် ယုဇနပင် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
အမေရိကန် ယုဇန ကို
AmericanDogwood. https://www.google.com.vn/search?q=American+Dogwood+webmd&oq=American+Dogwood+webmd&aqs=chrome..69i57.1562j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=American+Dogwood+drugs.com&*. Accessed March 11, 2017